अब सबै जंगलहरू आराम गर्दै छन् - मुद्रण गर्न टिप्पणीहरू र पाठ
अब सबै जनावरहरू आराम गर्दै छन् - पाठ
पाना संगीत र पाठ अब सबै जंगलहरू आराम गर्दै छन्
अब सबै जनावरहरू आराम गर्दै छन्,
पशुधन, मान्छे, शहर र क्षेत्रहरू,
यसले सारा संसार सुत्दछ;
तर तपाईं, मेरो इन्द्र,
माथि, मा, तपाईंले सुरु गर्नुपर्छ,
जसले तपाईंको सृष्टिकर्तालाई प्रसन्न तुल्याउँछ।
तिमी कहाँ हो, सूर्य, रुको?
रातले तिमीलाई बाहिर निस्क्यो,
रात, दिनको शत्रु।
त्यहाँ ड्राइभ गर्नुहोस्; अर्को सूर्य,
मेरो यीशु, मेरो प्रेमी,
मेरो हृदयमा पनि उज्ज्वल देखिन्छ।
दिन बितिसकेको छ
गलिड स्टारहरू glisten
नीलो आकाश हल्लामा;
त्यसैले म खडा हुनेछु,
जब मेरो नाम जान्छ
मेरो ईश्वर आँसुको यो भाग बाट बाहिर।
शरीर आराम गर्न रुचाउँदछ
ड्रेस र जूता बन्द गर्दछ,
म त्यसबाट टाढा छु
ख्रीष्टले मलाई लगानी गर्नुहुनेछ
आदर र महिमाको स्कर्ट
हेड, खुट्टा र हात
आजसम्म खुशी छ कि अन्त सम्म
हृदय, आनन्दित हुन्छ, तपाईं हुनुहुनेछ
यी पृथ्वीको दु: खबाट
र पापहरूबाट मुक्त काम।
अब जाओ, तिमी सुस्त अंग,
जाओ र तल राख्नुहोस्,
त्यहाँ घण्टा र समय छन्,
किनभने तपाईं तयार हुनुहुनेछ
पृथ्वीमा सानो ढोका आराम गर्न।
मेरो आँखा घृणित छन्,
कुनै समय तिनीहरू बन्द छन्।
त्यसपछि शरीर र आत्मा कहाँ छ?
उसलाई आफ्नो वरिपरि लिनुहोस्
सबै हानिको लागि राम्रो हुनुहोस्,
तिमीले आँखा र इस्राएलको रक्षा गरौ।
पखेटा दुवै बाहिर बाहिर,
येशू, मेरो आनन्द,
र आफ्नो सानो छोरो लिनुहोस्।
के शैतानले मलाई निको पार्छ,
त्यसोभए स्वर्गदूतहरूले यसो भन्छन्:
"यो बच्चा असीमित हुनुपर्छ।"
तपाईं पनि, मेरो ढोकाहरू,
आज सड्न हुँदैन
कुनै दुर्घटना वा खतरा छैन।
परमेश्वरले तपाईंलाई खुसीसाथ सुत्नु भएको छ,
गलिड हतियारहरूको कल्पना गर्नुहोस्
बिस्तारै र उहाँका स्वर्गदूतहरू पनि।
नर्सरी कविताबाट टिप्पणीहरू अहिले ग्राफिक्स फाईलको रूपमा सबै जंगलहरू बाँकी छन्